KhunMoung ' s: Running Stuffs in My PC
CMS March 11, 2008 at 2:07 AM
မသုံးဘူးတာတွေ စမ်းသုံးကြည့်ဦးမယ် ကျေးဇူးပဲ ကိုခွန်မောင် :)
Myo Kyaw Htun March 11, 2008 at 4:24 AM
မသိတာတွေ များတယ်။ အပေါ်ကလူကြီး ပြောသလို စမ်းကြည့်ရဦးမယ်
Winkabar March 11, 2008 at 11:54 PM
ခွန်မောင် လက်ရွေးစင်ပေါ့နော်။ စုံနေတာပဲ။ ကောင်းတယ်ကိုခွန်မောင်ရေ။ ကျေးဇူးနော်။
စိုးထက် - Soe Htet ! March 12, 2008 at 1:04 PM
ကောင်းတယ် .. လိုက်လုပ်မယ်ဗျို့ :D
KhunMoung March 14, 2008 at 1:56 PM
I'm just an end user.You can do these better for me :D ... Thx for all your comments.
အခွံနဲ့တူတာတွေရှိတယ်။ Antivirus တို့ PDD Reader တို့ပေါ့။ အခွံက မြင့်တယ်... MS Word တော့ ၂၀၀၇ ကို မသုံးဖူးသေးဘူး။ တခြားဟာလေးတွေလည်း သုံးကြည့်ရဦးမယ်။
MELODYMAUNG April 5, 2008 at 10:35 AM
ဂိမ်းမကစားနာတာချင်းတော့ အတူတူပဲ တနားပါဒယ်
Khun Myo Nge May 19, 2008 at 7:28 AM
If your name Khun Maung,want to know What nation are you?
Khun Myo Nge (Minnesota, U.S.A)
KhunMoung May 19, 2008 at 1:04 PM
Khun Myo Nge May 19, 2008 at 11:47 PM
ဟွန်ဟောင် သရေမွေးသေငါဗာ ခွန်မောင်း နောဝ်သွူ ။
ခွန်မျိုးငယ် Nice to meet you Khun Maung.I realy attributes to you. You'reagrate Pa-O blocker.I'm your cousin.